> Household wear>Double pedestal
Double pedestal – steel top with7drawers and keylock. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါဝင်သော အံဆွဲ (၇)ခုနှင့် ဘေးတိုင်ခုံနှစ်ခုပါရှိသည့် အပေါ်အခင်းပြားစတီးနှင့်စားပွဲခုံ။ Size: W150*D80*H75 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၅၀၊ အနံ ၈၀၊ အမြင့် ၇၅ စင်တီမီတာ Central lock system, Top covered with rubber sheet ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါဝင်ပြီး၊ အပေါ်အခင်းပြားစတီးအား ဘေးပတ်လည်ရာဘာစွပ်ထားသည်။2options available: Center drawer or Keyboard tray ရွေးချယ်မှု (၂)ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အလယ်နေရာတွင် အံဆွဲ သို့မဟုတ် ကီးဘုတ်ထားရန်နေရာ ရွေးချယ်နိုင်သည်။